အနက်ရောင် coverlay နှင့်အတူတင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့2countersunk အမြင့် Precision PCB နှင့်အတူအလွှာ ENIG 1oz PCB - အနက်ရောင် coverlay နှင့်အတူတရုတ်တင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့2countersunk အမြင့် Precision PCB ပေးသွင်းနှင့်အတူအလွှာ ENIG 1oz PCB,စက်ရုံ -WMD
လေဟာနယ် အထုပ်, 30PC များ / အိတ်
2 အလွှာတင်းကျပ်-Flex ဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ် Flex ကိုတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့
အနက်ရောင် coverlay နှင့် countersunk နှင့်အတူတင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့, Polymide နှင့် FR4 ပစ္စည်းကိုသုံးပါ, 0.15မီလီမီတာ polymide + 1.5မီလီမီတာ FR4, ရှင်းလင်းသောကြေးနီကျော်ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှအနက်ရောင် coverlay Apply, Silkscreen အဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်, အမြဲတမ်း, အော်ဂဲနစ်, Non-ကူးမှုမှင်. ENIG မျက်နှာပြင်ကုသမှု, ယူနစ်အရွယ်အစား: 57 * 84MM, တစ်ခုတည်းအပိုင်းအစအဖြစ်သင်္ဘော, အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ countersunk နှင့်အတူတင်းကျပ်-Flex ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, ENIG, 1အောင်စကြေးနီ, အနက်ရောင် coverlay, min.hole အရွယ်အစား :0.2MM. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
LED အလင်း 1 လူမီနီယမ် PCB သတ္တု PCB OSP Layer
တင်းကျပ် 2Layers PCB အဖြူရောင် soldermask နှင့်အပြာရောင် silkscreen 1oz TG140 PCB immersive ကိုရွှေ KB ပစ္စည်း
6အလွှာ PCB impedance ထိန်းချုပ်ရေး Multilayer PCB ENIG 3U "